Ciidamada AMISOM ee ku sugan degaanka Dayniile oo weerar qorsheysan saaka ku qaaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyooyin Shabaab ah
Ciidamada Afrikaanka ah ee nabad iilaalinta u jooga magaalada Maqdisho ayaa saaka waaberigii markii ay saacadda Muqdisho ahayd 5tii subaxnimo weerar qorsheysan ku qaaday goob ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyooyin ka tirsan kooxda Alshabaab, kuwaasoo xilligaas isku diyaarinayay inay weeraro dhuumaaleysi ah ku qaadaan goobo ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada AMiSOM iyo kuwa DFKMG ee Soomaaliya.
Sarkaal ka tirsan ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa in ciidamada AMISOM ay weerar qorsheysan ku qaadeen Maliishiyada alshabaab oo ku sugnaa meel ku taal duleedka degmada Dayniile iyagoo halkaas kasoo abaabulayey falal amniga wax loogu dhimaayo iyo qorshaha geedi socodka nabada isla markaana damacsanaa inay weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ku soo qaadaan magaalada Muqdisho.
Sarkaalaka ayaa xaqiijiyay in weerarka uu dhacay 5 AM e exilliga afrikada Bari isla markaana dagaal kooban oo daqiiqado socday kadib ay u suurto gashay ciidamada AMISOM ee weerarka qaaday inay la wareegaan dhamaan agabkii iyo sahaydii shabaab ku dagaal geli lahaayen, isla markaana ay halkaasi ku dileen tiro ahaan illaa iyo 18 dagaal yahan ah halka saddex kale oo dhaawac ahna hadda lagu daweynayo isbitaalka.
Sidoo kale sarkaalkaas ayaa sheegay in wiil yar oo 14 jir o oka mid ahaa maleeshiyooyinkaas ay gacanta ku dhigeen isla markaana ay haatan baadigoob ugu jiraan waalidkii dhalay si loogu wareejiyo wiilkooda.
Sarkaalkaas ayaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celino shacabka soomaliyeed ee sida joogtada ah nagula shaqeeyo kuwaasoo nagu soo wargeliya wixii ammaanka wax u dhimaya.
Ciidamada DFKMG ee Soomaaliya oo maanta fashiliyay laba qarraax oo lala damacsanaa in laga geysto goobta uu shirku ka dhacayo
Ciidamada DFKMG ee Soomaaliya ee sugaya amniga goobta uu ka socdo shirka ansixinta dastuurka ee dugsiga rtababarka ciidamada Booliska ee General Kaahiye Police Accademy(ex Scula Polizia) ee magaalada Muqdisho ayaa saaka ku guuleystay inay fashiliyaan qarraxyo naftii halignimo ah oo la damacsanaa in laga faliyo madasha uu ka socdo shirku.
Laban in oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo lugeynaya ayaa isku dayay inay ka soo gudbaan bar kontrool oo ay ciidunku ku lahaayeen waddada soo gasha iskoola boliisiya.
Ciidamada ayaa markii ay ka shakiyeen labadaas shaqsi ayaa waxay ku amreen inay istaagaan si loo baaro haseyeeshee labadii nin ayaa iska dhega tiray amarkii la siiyay ee ahaa inay istaagaan kadibna waxay ciidanku ku qasbanaadeen inay xabbado ku furaan raggaas kuwaasoo isla goobtaas ku qarxay.
Dhanka kale illaa iyo haatan warar dheeraad ah oo sheegaya in wax qasaare ah ay qarraxyadaasu gaarsiiyeen ciidamada iyo shacabkaba .